Umsele waseSegovia | Izindaba Zokuhamba
Isazi sefilosofi uMaría Zambrano wayevame ukuthi "eSegovia ukukhanya akuhlali esibhakabhakeni, kepha kukhonjiswa kusuka edolobheni uqobo" futhi wayeqinisile. Idolobha laseCastilian liqukethe umlando omningi nezikhumbuzo eziningi ezinhle kangangokuba ubuhle balo abunakwa.
I-silhouette yaseSegovia idonswa ngumsele wamanzi odumile waseRoma osukela ngekhulu lokuqala ngesikhathi sikahulumeni we-Emperor Trajan. Kodwa-ke, lesi sibalo sinemvelaphi yaseCeltiberian yize imibhalo yamaRoma iyona egcina isisindo esikhulu namuhla ngenxa yesithonjana sokuthi lokhu kwakhiwa kube yikho.
1 Umsuka womsele
2 Izici zomsele wamanzi waseSegovia
3 Ibisetshenziswa kuze kube muva nje
4 Inganekwane yomsele wamanzi waseSegovia
Igama lalo lifanele ukuhlanganiswa kwamagama amabili esiLatini aqua (amanzi) nelithi ducere (ukushayela). Etholakala enkabeni yedolobha, umsele wamanzi wakhiwa ngekhulu lokuqala ukuletha amanzi avela eSierra de Guadarrama edolobheni. Ngaphambi kokwakhiwa kwayo, onjiniyela baseRoma kwakudingeka benze ucwaningo lwendawo, ukungalingani kwayo kanye namathuba omzila wamanzi.
NgePlaza de la Artillería ngakwesokudla nePlaza del Azoguejo ngakwesobunxele, kubonakala sengathi umsele wamanzi uhlukanisa iSegovia kabili. Kodwa iqiniso ngukuthi ukwakhiwa okuyisikhumbuzo kuhlangana ngokuhambisana nakho konke ukwakhiwa komuzi, lapho iKhathedrali, izindonga kanye ne-Alcazar kufanelwe ukubalulwa okukhethekile. KwiMeya yePlaza singathola izinsalela zokunye kokudla okuvela ezikhathini zamaRoma, okwakusetshenziselwa ukuqeda ukungcola emanzini.
Izici zomsele wamanzi waseSegovia
Umsebenzi womsele kwakuwukuhambisa amanzi ayigugu asuka emthonjeni waseFuenfría, oqhele ngamakhilomitha ayi-17, ayise eSegovia. Ngalokhu, lo msebenzi omkhulukazi wobunjiniyela baseRoma wakhiwa ngamamitha acishe abe ngu-30 ukuphakama namakhothamo ayi-167 athatha ithuba ngokungalingani komhlaba ngamamitha ayi-16.222 ukuphakela abantu.
Ukwakhiwa kwehlukaniswe izingxenye ezintathu ezihlukene: Indawo engaphandle kwamadolobha (lapho amanzi ayeqoqwa khona), indawo eseceleni kwedolobha (isigaba somsele wamanzi owawuthwala amanzi) nendawo yasedolobheni (lapho amanzi ayenziwa futhi esatshalaliswa khona lapho iya khona).
Lapho efika eSegovia, amanzi aqoqwa emgodini owawuthola igama elithi 'El Caserón' futhi ngohlelo lokusabalalisa oluyinkimbinkimbi olwenziwe ngamabhokisi ahlukanisiwe, amanzi ahlinzekwa emithonjeni nasemithonjeni yezindlu ezizimele.
Yini enye. umsele waseSegovia wawunamapayipi angaba ngu-15 wamapayipi angaphansi komhlaba, phakathi kwendawo ebamba amanzi ezansi kweSierra de Guadarrama kanye nedolobha elisemaphethelweni edolobha, lapho umsele wavela khona phezu kwemengamo cishe amamitha ayi-800.
Kodwa akuveli nje kuphela ukuthi amanzi avela eSierra de Guadarrama kodwa nasemabhuloki amatshe egwadle asetshenziselwa ukwakhiwa kwawo.
Uma bebheka umsebenzi omuhle kangaka wobunjiniyela bomphakathi, abaningi bayazibuza ukuthi bekungama kanjani isikhathi eside usesimweni esifanele. AmaRoma awathunganga ngaphandle kwentambo kanti umsele wakhiwe ngezinsika eziyi-120 ezisekela imengamo engu-167 eyenziwe ngama-ashlars ahlanganiswe ngaphandle kwanoma yiluphi uhlobo lodaka. Basekelwa ukutadisha okuphelele kwamandla okufaka phakathi kwamabhulokhi amatshe!
Ngo-1999 kwathiwa yi-International Artistic Historical Monument of Civil Engineering, yi-ASCE (American Society of Civil Engineers).
Ibisetshenziswa kuze kube muva nje
AmaRoma enza umsebenzi wobuciko kangangokuba umsele wawusetshenziswa kuze kube muva nje ngoshintsho oluncane phakathi kwamakhulu eminyaka.
Kuphela ngesikhathi amaSulumane ehlasela iSegovia ngo-1072, imicibisholo ethile engama-36 yonakala. Umonakalo ubuyiselwe nguFray Juan de Escobedo ngekhulu le-XNUMX.
Kusukela ekuqaleni kube nemicibisholo emibili emseleni wamanzi lapho mhlawumbe bekukhona onkulunkulu bamaqaba kepha yathathelwa indawo yimifanekiso kaSan Sebastián neVirgin ngesikhathi seMakhosi amaKhatholika. Ngaphansi kwezicucu kwakukhona inganekwane ngezinhlamvu zethusi ezibhekisele ekusungulweni komsele wamanzi, okusasele umkhondo walo mbhalo kuphela namuhla.
Inganekwane yomsele wamanzi waseSegovia
Le nganekwane isitshela ukuthi intombazane yathengisa umphefumulo wayo kudeveli ngenhloso yokwakhiwa komsele wamanzi ukuze kungadingeki wehle wehle nsuku zonke ukuthola amanzi esiqongweni sentaba.
UDeveli wasemukela lesi sivumelwano kodwa ukuze athathe umphefumulo wentombazane kwakumele awuqede ngaphambi kokuba iqhude likhale ngakusasa ekuseni, angazange akwenze futhi intombazane yasinda ngokulambisa enhlekeleleni enjalo.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Spain amadolobha » Umsele waseSegovia
UMolina de Aragon
Yini ongayibona edolobheni lasendulo lase-idbidos